Nintendo wuxuu ku dhawaaqay in Mario la keeni doono shaashadda weyn | Abuurista khadka tooska ah
Filimaan kacsan beryahan waxay noqdeen shaqooyin yaryar oo farshaxan ah kuwaas oo sheegaya sheekooyin ka xiiso badan kuwa khiyaaliga ah oo ay tahay in laga sheekeeyo waxa hadda ka dhacaya meeraha oo dhan. Pixar ayaa ku darsaday Marka waxaan dhihi karnaa filimada sida Inside Out ay awood u leeyihiin inay saameyn weyn ku yeeshaan dhagaystayaasha da 'kasta.
Sidaan rajeyneyno inaad sameyso Nintendo's Mario filim filim ah, ayaa maanta lagu dhawaaqay qof walbana wuu layaabay, iyo inbadan markaan ogaano in shirkada daryeeleysa ay tahay mida ka dambeysay Minions iyo Gru, xumaanleyda aan ugu jeclahay. Waa Mario iyo Luigi kuwaas oo xawaare buuxa ugu socda shaashadda weyn iyagoo wata filim cusub.
Waa istuudiyaha animation Nalalka Iftiiminta kuwa heshiiska la galay Nintendo si loo soo saaro filim muddo dheer soconaya. Waxay ahayd shirkadda Japan oo saaka ka xaqiijisay qoraal ay soo dhigtay tweet.
Waxaa si wada jir ah u soo saari doona Shigeru Miyamoto, oo ah abuuraha taxanaha ciyaarta fiidiyowga ee Mario, iyo Chris Meledandri, oo ah agaasimaha shirkadda 'Illumination'. Waxaan nahay ka hor mid ka mid ah liisamada ugu qiimaha badan oo ay kasbadeen istuudiyaha Hollywood sannadihii la soo dhaafay, sidaa darteed waxaa laga filayaa inay wax walba u hurto sidii ay u heli lahaayeen filim aflaamta isdabajooga ah wada.
Ka hor Nintendo waa mid nool Qalabkiisa cusub ee loo yaqaan 'Nintedo Switch console', wuxuu ku sii jeedaa inuu raadsado ilo kale oo dakhli leh filim animated ah oo ka yimid mid ka mid ah istuudiyaha animation-ka ugu caansan.
Filimada sida Minions ama Gru, xumaanta aan jeclahay, Waxay isaga dhigeen meel aad u qaas ah si uu u qabto mashruuca weyn ee horyaala inuu keeno dhamaan astaamaha Nintendo tiyaatarada. Waxaan rajeyneynaa inay yaqaanaan sida loo garaaco furaha saxda ah si loo quudiyo rabitaanka ah inaad ku aragto bilowga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Nintendo wuxuu ku dhawaaqay Mario filim filim ah